Gabdhaha Italy oo gaaray siddeed dhammaadka Koobka Adduunka ee Dumarka 2019 kaddib markii ay garaaceen China.. + SAWIRRO – Gool FM
(Paris) 25 Juunyo 2019. Gabadhaha xulka qaranka Italy ayaa gaaray siddeed dhammaadka koobka Adduunka haweenka 2019, kaasoo ka soconaya Waddanka Faransiiska kaddib markii ay guul muhiim ah ka gaareen China.
Xulka Talyaaniga ayaa ku adkaaday labo gool oo ay kala dhaliyeen labadii qeybood ee ciyaarta.
Gabadha Shiinaha ayaa goolka hore looga naxsaday 14’daqiiqo waxaana ugu shubtay Valentina Giacinti, sidaas ayaana lagu kala nastay gabdhaha Italy oo kulanka ku hoggaaminaya 1-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka qaranka Italy ayaa sii dheereystay hoggaanka ciyaarta waxaana ay la yimaadeen goolka labaad 49’daqiiqo waxaana u dhalisay Aurora Galli.
Isku dayo dhowr ah oo ay sameeyeen gabadha Talyaaniga kaddib kulanka ayaa ku soo dhammaaday 2-0 looga adkaaday China.
Xulka Italy ayaana sidaas ku gaaray siddeed dhammaadka Koobka Adduunka dumarka 2019, waana markii ugu horreysay oo ay adkaadaan kulan bug-bax ah koobka Adduunka haweenka, halka gabadha Shiinaha ay tartanka isaga hareen.
Xulka Italy waxa ay la ciyaari doonaan siddeed dhammaadka tartankan Koobka Adduunka dumarka midkii soo adkaada xulalka Netherlands iyo Japan oo caawa wada ciyaaraya.